उज्यालोका नायक कुलमानमाथि किन यसरी खनिए भीम उपाध्याय ? रहस्य थाहा पाएर सामाजिक सञ्जाल खैलाबैला — Sanchar Kendra
उज्यालोका नायक कुलमानमाथि किन यसरी खनिए भीम उपाध्याय ? रहस्य थाहा पाएर सामाजिक सञ्जाल खैलाबैला
काठमाडाैं । सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि खनिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको बिशेष योजनाअनुसार चल्ने पूर्वसचिव उपाध्यायले कुलमानले दण्डनीय अपराध गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै कार्वाहीको माग गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले शुल्क नतिरेको भन्दै इन्टरनेट बन्द गराएपछि उपाध्यायले यस्तो बताएका हुन् । ‘ईन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो, यसमा अवरोध गर्नु मानव अधिकार र संविधान कानुनको घोर उलंघन हो।
मुद्दा मामला गरेर लिनुदिनु जो जे गर्नु गरे हुन्छ तर जनताको आधारभूत अत्यावश्यक अधिकार कुंठित गर्न कुनै हालतमा कसैले पनि पाउदैन। यसो गर्नु दण्डनीय हुन्छ,’ उपाध्यायले भनेका छन् ।
उनको स्टाटस जस्ताको तस्तैः ‘ईन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो, यसमा अवरोध गर्नु मानव अधिकार र संविधान कानुनको घोर उलंघन हो। मुद्दा मामला गरेर लिनुदिनु जो जे गर्नु गरे हुन्छ तर जनताको आधारभूत अत्यावश्यक अधिकार कुंठित गर्न कुनै हालतमा कसैले पनि पाउदैन। यसो गर्नु दण्डनीय हुन्छ।’
यसैबीच पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काट्ने निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पछि हटेका छन् ।
आइतवार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पानको बैठकपछि प्राधिकरण तार नकाट्न सहमत भएको हो ।